Culeys horleh oo soo wajahay doorashada Galmudug – Kalfadhi
Culeys horleh oo soo wajahay doorashada Galmudug
January 22, 2020 Hassan Istiila
Xilli dhawaan la doortay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Galmudug oo sanadihii dambe uu khilaaf hareeyay ayaa waxaa haddana soo baxaya in khilaaf horleh uu ka dhashay doorashada madaxweynaha, ku xigeenkiisa iyo qaabka loo maamuli doona.
Ururka Ahlu Sunnah oo Dowladda Soomaaliya ay dhowr jeer isku khilaafeen hannanka doorashada Galmudug ayaa xildhibanaada ay soo xuleen ee katirsan baarlamaanka cusub ee Galmudug waxay shegeen in “guddoomiyaha baarlamaanka uu afduubay doorashada guddiga iyo qofka noqonaya guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweyne iyo ku xigeenkiisa.
“Markii la ina doortay, fadhigii ugu horeeyay ee aan rabnay in aan ku doorano guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen ayaa waxaa la ina yiri qof ayaa maqan oo waxba lama dooran karo, runtii hawsha waa la joojiyay, kadibna waxaa la isku qabtay qofka noqonaya gudoomiyaha, balse guddoomiye Gacal ayaa afduubay guddiga doorashada”, ayuu yiri mid kamid ah xildhibaanada Ahlu Sunnah ee katirsan guddiga doorashada madaxweynaha ee Galmudug
Xildhibaankan katirsan Ahlu Sunnha ayaa intaa raaciyay in Maxamed Nuur Gcaal uu shir guddoomiyay guddiga, isagana uu soo jeediyay dadka loo dooranayo guddoonka guddiga, arrintaas oo uu ku tilmaamay “mid baalmarsan sharciga”.
Hadalka xildhibanaada ayaa yimid kadib markii guddoomiye Maxamed Nuur Gacal uu sheegay in la dhisay guddiiga maamuli doona doorashada, arrintaas oo uu sheegay in uu ansixiyay baarlamaanka cusub ee Galmudug.
Guddoomiye Gacal oo ka hadlay magaalada Dhusa-Mareeb ayaa musharaxiinta ugu baaqay in ay ku diyaar garoobaan 10-ka maalmood ee soo socota.
Haseyeeshee qaar kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Galmudug ee kala ah Cabdiraxmaan Odowaa, Cabdi Dheere, Cabudllaahi Faarax iyo Kamaal Guutaale ayaa sheegay in aanay ku qanacsaneyn qaabka ay wax u socdaan.
Musharaxiintan oo horay usoo jeediyay in dib loo dhigo doorashada ayaa sidoo kale sheegay in aysan ka qeybgeli doonin doorasho ay sheegeen in ay maamuli doonaan guddi kala qeybsan, waxayan Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyeen in ay faragelin ku heyso hannaanka doorashada Galmudug.
Arrintan ayaa kusoo aadeyso xilli dhawaan magaalada Gaalkacayo uu maamul kale kaga dhawaaqay madaxweynaha wakhtigiisu sii dhamaanayo ee Galmudug, Axmed Ducaale Xaaf, kaas oo sheegay “in Dowladda Federaalka ay afduubtay hannaanka doorashada ee Galmudug”, qeybna uusan ka ahayn waxa ka socda Dhuusamareeb.
Xaaf ayaa soo saaray liis xildhibaan ah oo barbarsocda kan laga dhisay Dhuusamareeb, waxaase aan la ogeyn sax ahaanshaha arrintaans iyo halka ay ku dambeyn doonta.
Qabashada doorashada madaxweynaha Galmudug iyo ku xigeenkiisa ayaa lagu wadaa in ay dhacdo 30-ka bishan Janaayo. Xigasho BBC Somali.